Tuesday August 13, 2019 - 08:47:32 in Maqaallo by Wariye Tiriko
ASC Ciid wanaagsan dhamaan umada islaamka Gaar ahaan inta afsomaliga ku hadasha.Maanta waxaynu Falanqaynaynaa Madaxawyne paul kagame madaxwaynaha dalka Rwanda o ah dal ku yaal qaarada Africa lakiin ah dal horumaray o ku dayasho mudan.
Shalay Rwanda waxay ahayd dal faqiira o dadkisu ku noolyihiin meel ka hoosesa xariiqda faqriga balse ay u dheyrayd in ay is dilaan isla markana is gumadaan dagalki dhex maray labada qomiyadod e daga dalka Rwanda waxa u ahaa dagaal samayn leh o aad u qadhadha
isla markana lays ugadhsanayay o ay dhaman istagtay noloshi isla markana ay dambas noqotay dalka Rwanda. Waxa xilka qabtay nin fariid ah o go’aan adkaa isla markana aminsana in ay maalin uun Rwanda ay dadkedu hashiin donan isla markana gacmaha is qabsan donan o ay ka shaqen
donan horumarka dalkooda isla markana ay la tartami donan dadyawga kale e aduun waynaha. Paul kagame marki u la waregay waxa ugu horesay e u qabtay waxa ay ahayd in u dawlada ka saaro kuwi jeclaa in anay dadka rwandiska ahi isa samaxaan ka dib waxa u samayay dawlad nadiifa waxa anu qatay go;an adag o ku dhisnaa isu tanasulid iyo isa samax waxana hashiyay dalkii Rwanda isla markana dhistay dal qurux badan o
Ka dib dadki markay isa samaxen kaliyata dawladi waxay si waday dadalki o waxa ay sameyan o ay abureen dhaqaale kor u qaada nolosha si ay dadku ugu noladaan nolol jaban waxana lahelay fursado u mawadinku kaga shaqaysan karo dalkisa isla markana si nool o
wanaagsan dalkisa ugu Nolan karo o ay karamu ku jirto. Dadka shalay is lenayay waxa ay noqdeen muwadiniin wax fahasan o walalo ah o gacmaha
is qabsaday isla markaasana dalka rwadna ku nool. Manta Rwanda waxay ku jirtaa dawladha adunka ugu dhaqaale roon isla markaana waa
mid ka mida dawladha afirca ugu horumarsan e la hiigsado caasimada dalka Rwanda e Kigali waa mid ka mida casimada ugu nadiifsan e ugu qurux badan Africa. Ugu danbayn manta inagu dawlada ahaan(Somaliland) waynu dhaaana shalay halkay tagneed Rwanda o manta ayaynu ka horumarsanhay iangu markay dadka Rwanda is lenayeen bal aynu gacmaha is qabsano o si wax u wada aragno o kaliyata aynu ka shaqeeno Somaliland quruxsan o horumarsan o ay ka tanasulno qabyalada una tanasulno
qaran dhisan o horumarsan sidaas Rwanda iyo dawladaha kale e horumaray ballanteenu waa dad walalo ah o gacmaha is haysta oo isku mabda; ah o ku nool dal dhisan o horumarsan isla markana leh kabayaal dhaqaale o inaga badan ugu danbayn qof walba halkisa haka shaqeyo o ha isku xilqaamo si u uga shaqayn lahaa nabada.